Ny 2016 Chinaplas Booth Number for Kingswel milina - China Kingswel milina
Ry mpanjifa sy ny namana,
Kingswel milina mandeha mba handray anjara amin'ny ara-drariny 2016 Chinaplas in Shanghai. Ny trano heva vaovao isa no eto ambany.
Misaotra anareo rehetra noho ny fanampiana sy ny matoky ny Kingswel milina fa toy izany nandritra ny taona maro. Tsy afaka miandry ny hahita anao amin'ny 2016 Chinaplas any Shanghai.
Ao tsara tarehy io, afa-tsy ny bobongolo nitsoka milina sy ny bobongolo, ny 3D printy ihany koa tafiditra. Tamin'ity indray mitoraka ity, isika dia hitondra ny teny anivon'ny ambaratonga mialoha milina sy ny printy 3D.
Manantena hahita anareo amin'ny Shanghai.